Dowlada Soomaaliya oo Digniin culus u dirtay Shirkadaha Isgaarsiinta Dalka……… – Goobjoog News English
Wasiirka Arrimaha Gudaha & Amniga Qaranka Mudane Cabdikarim Xuseen Guuleed ayaa cambaareeyey Xarakada Al-Shabaab dhawaaqidii ay ku sheegeen inay xanibayaan adeegyada internetka oo shacabku isticmaalo.
Wasiirka ayaa yiri “Dowladda Soomaaliya waxey sida ugu adag u cambaareyneysaa falkan oo tusineysa sida kooxaha argagaxisada ah ay argagax ugu ridayaan shacabka oo ay ka hor istaagayaan isticmaalka internetka. Dastuurkeena ayaa qoraya xoriyadda hadalka ay lama taabtaan tahay, oo shacabku ay xaq u leeyihiin ay macluumaadka iyo wararka ku helaan iyadoon la cabsi gelineynin.”
Shacabku waxey u isticmaalaan internet ka inay wax ka bartaan, isla markaana ay kula xiriiraan eheladooda caalamka kala jooga iyo inay aqbaarta caalamka ka helaan. Ma aqbali karno in shacabkayaga laga joojiyo internetka oo muhiim u ah.
Warbaahinta Soomaaliyeed waxaa mas’uuliyadi ka saarantahay inaysan borobogaandada argagaxisada fuliyaan. Warbaahintu waa inay u istaagtaa danaha shacabka Soomaaliyeed si ay u helaan adeegyada warbaahineed iyo internetka oo ah xuquuq ay shacabku leeyihiin. Warbaahintu waa inaysan kaalmeynin argagaxisada, waxaan ka fileynaa warbaahintu inay noqdaan codkii shacabka oo aysan noqon codka argagaxisada.
Sidaas daraadeed, waxaan ku boorineynaa shirkadaha Isgaarsiinta, inaysan aqbalin awaamiirta iyo hanjabaadaha kooxaha argagaxisada, oo aysan ka joojin shacabka adeegyada internetka oo muhiim u ah shacabka. Shirkadii lagu helo inay taageereyso kooxaha argagaxisada ah waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciga waafaqsan.
Shacabkayaga cadowga kaliya ay leeyihiin waa kooxaha argagaxisada ee Al-Shabaab, Sidaas daraadeed, waxaa mas’uuliyadi naga saaran tahay inaan shacabka ka badbaadino hanjabaadaha ka imanay kooxaha argagaxisada.
Istraatejiyada Al-Shabaab ayaa ah in shacabka la aamusiyo isla markaana ay baad ka qaataan shirkadaha Isgaarsiinta si ay u helaan dhaqaalaha ay aadka ugu baahanyihiin. Dowladdu way xoojineysaa dagaalka lagula jira kooxahan, waqtigoodana wax yar baa ka haray inta laga sifeynayo dalka oo dhan.